Zero စျေး - အွန်လိုင်း ZER ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zero (ZER)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zero (ZER) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zero ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 194 673.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zero တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zero များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZeroZER သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.198ZeroZER သို့ ယူရိုEUR€0.168ZeroZER သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.151ZeroZER သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.18ZeroZER သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.78ZeroZER သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.25ZeroZER သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.41ZeroZER သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.74ZeroZER သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.265ZeroZER သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.276ZeroZER သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.43ZeroZER သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.53ZeroZER သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.07ZeroZER သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹14.83ZeroZER သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.38ZeroZER သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.271ZeroZER သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.299ZeroZER သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.17ZeroZER သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.38ZeroZER သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥20.94ZeroZER သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩235.06ZeroZER သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦76.47ZeroZER သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.57ZeroZER သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.48
ZeroZER သို့ BitcoinBTC0.00002 ZeroZER သို့ EthereumETH0.000501 ZeroZER သို့ LitecoinLTC0.00342 ZeroZER သို့ DigitalCashDASH0.00203 ZeroZER သို့ MoneroXMR0.00212 ZeroZER သို့ NxtNXT13.83 ZeroZER သို့ Ethereum ClassicETC0.0283 ZeroZER သို့ DogecoinDOGE56.24 ZeroZER သို့ ZCashZEC0.00208 ZeroZER သို့ BitsharesBTS7.53 ZeroZER သို့ DigiByteDGB6.8 ZeroZER သို့ RippleXRP0.671 ZeroZER သို့ BitcoinDarkBTCD0.00672 ZeroZER သို့ PeerCoinPPC0.658 ZeroZER သို့ CraigsCoinCRAIG88.8 ZeroZER သို့ BitstakeXBS8.31 ZeroZER သို့ PayCoinXPY3.4 ZeroZER သို့ ProsperCoinPRC24.45 ZeroZER သို့ YbCoinYBC0.000105 ZeroZER သို့ DarkKushDANK62.48 ZeroZER သို့ GiveCoinGIVE421.78 ZeroZER သို့ KoboCoinKOBO43.76 ZeroZER သို့ DarkTokenDT0.182 ZeroZER သို့ CETUS CoinCETI562.37